एक सय वर्ष कटेका बृद्धबृद्धाले गरे विवाह ! » Nepali Mato
५ श्रावण २०७६, आईतवार ०६:३९ July 21, 2019 Nepali MatoLeaveaComment on एक सय वर्ष कटेका बृद्धबृद्धाले गरे विवाह !
काठमाडौं । भनिन्छ, प्रेम गर्न उमेरले छेक्दैन् । मानिस जवान हुँदा होस् वा बुढ्यौली जुनसुकै उमेरकाले पनि प्रेम गर्न सक्छन् । यो कुरा अमेरिकाका एक जोडीले प्रमाणित गरिदिएका छन्, त्यो पनि सय वर्षको उमेरमा ।
अमेरिकाको ओहियोका सय वर्षका जोन र १ सय २ वर्षकी फिलिस कुकले विवाह गरेका छन् । दुबै पछिल्लो एक वर्षदेखि एक–अर्कासँग डेटमा थिए । दुबैको भेट गत वर्ष किंग्सटन रेसिडेन्स नामको वृद्धाश्रममा भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुको दोस्तीसँगै प्रेममा परिणत भयो ।
उनीहरु एक–अर्कालाई डेट गर्न थाले र उनीहरुले विवाह गरेका छन् । जोनले दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका थिए । उनी भर्खरै सय वर्ष पुगेका हुन् । अगस्ट ८ मा फिलिस १ सय ३ वर्ष पुग्नेछिन् । उनकी आमा १ सय ६ वर्ष बाँचेकी थिइन् । जोका श्रीमतीको करिब १० वर्षअघि निधन भएको थियो । यस्तै, फिलिसका श्रीमानको १५ वर्षअघि निधन भएको थियो ।
श्रीमानको निधनपछि नै उनी वृद्धाश्रममा बस्न थालिन् । यो नवविवाहित जोडीले राम्रो सम्बन्धको कडी के हो भन्ने प्रश्नमा उत्तर दिए, ‘एक–अर्काप्रतिको सम्मानले नै सम्बन्धलाई दिगो बनाउँछ ।’
शुभ बिहानी । सुपादेउरालीको दर्शन सहित आजको राशिफल हेर्नुस्
यो वर्षको अर्को उत्कृष्ट तीज गीत “आँगनी”
प्रधानमन्त्रीलाई मार्छु भनेर कमेन्ट गर्ने एक जना बानेश्वरबाट पक्राउ
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १७:३२ May 20, 2019 Nepali Mato
अर्घाखाचीका प्रकास बिकको दुबै मिगौला फेल ; आर्थिक अभाबले उपचारमा समस्या
९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार २०:४९ February 21, 2019 Nepali Mato
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार १८:३५ August 13, 2019 Nepali Mato
मध्यरातमा भागेर बाँचियो
१ श्रावण २०७६, बुधबार ०८:५६ July 17, 2019 Nepali Mato
३१ असार २०७६, मंगलवार १७:०५ July 16, 2019 Nepali Mato
बाढी र पहिरोमा परी देशैभरमा १९ जनाको मृत्यु , ८ जना बेपत्ता
२८ असार २०७६, शनिबार १०:३७ July 13, 2019 Nepali Mato